: at 6/27/2009 01:00:00 PM
ကိုလူထွေး said... | Saturday, June 27, 2009 3:35:00 PM
ဒီကနေ ညှော်နံ့တောင်ရတယ်...းဝ)
အသံကယောက်ျားသံကြီးပါ... အဲဒါ ဖွားကိမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား...
မဟုတ်ရင်တော့ ဖွားကိမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်လိုက်မယ်...
အခုတကြိမ် ဦးနှောက်စားသွားတာ ကိကီဖြစ်သွားပြီ...
Anonymous said... | Saturday, June 27, 2009 3:59:00 PM
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရ ပလေတယ် .. haha
မီးပူနဲ့ ဖုန်းနဲ့ မှားနားထောင်ရတယ် လို့ :D
ကပ်ထားလိုက်ပါလား ကြာကြာ ...
ဖုန်းပြားကြီးက ဘာတွေပြောလဲ သိရအောင် ... :D
thawzin said... | Saturday, June 27, 2009 5:03:00 PM
အင်း ဘာများလဲလို့ , တခြား အန္တရယ်ဖြစ်မယ့်ထင်နေတာ ရီတောင်ရီမိတယ် နံပါတ် ၁၀ ထိ,
အင်း ဖြစ်တတ်တယ်နော် , အာရုံတွေများနေလို့ နေမှာ အဲဒီလူ ကျေးဇူးပါ သတိပညာပေးသော အစ်မကို
အဆိပ်ခွက် said... | Saturday, June 27, 2009 7:08:00 PM
ရီလဲရီရတယ်.. မီးပူဖုန်းလေး သူကို ဘာတွေပြောသွားလဲမသိဘူး ချက်ချင်းပြန်ချလိုက်တယ် ကောင်းမလေး ဖုန်းဆက်လာတာကို သူကလဲ ယောကျာ်ကြီးဖြစ်ပြိရှက်ရတယ် လိုအဟ..
မိုးခါး said... | Saturday, June 27, 2009 8:10:00 PM
ညီမကိုစောင်းပြောတယ် .. :P
မီးပူတိုက်ရမှာ သိပ်ပျင်းပဲ .. ကျန်တာတွေလည်းပျင်းတာပဲ .. (ပေါ်ကုန်ပါပီ :D)
တောင်ပေါ်သား said... | Saturday, June 27, 2009 9:46:00 PM
အဟား တော်တော်ရီရတယ်.. ဖုန်းနဲ့ မီးပူ မှားတိုက်ရတယ်လို့ အဟီးးး မှားစရာကလဲ ရှားပါ့
Khyl said... | Sunday, June 28, 2009 12:40:00 AM
လုပ်ပျံဘီ... ဒီပို့ကို funny category ထဲထည့်ထားတယ်....
ကြည့်ပါအူး မထင်ရဘူး ရက်စက်တတ်လိုက်တာ....
ခြေလှမ်းသစ် said... | Sunday, June 28, 2009 1:13:00 AM
ကြောက်ခမန်းလိလိ ပါပဲ ဖွားကိကိေ၇ အနော် အစမ်းတော့ ပါဘူး
Anonymous said... | Sunday, June 28, 2009 1:51:00 AM
မငုံ said... | Sunday, June 28, 2009 2:36:00 AM
ဘွားကိ..မိုက်တယ်မိုက်တယ်။။ အဲဒီဖုန်းမျိုးဝယ်ပေး ၀ယ်ပေး။
( ဒီမြေးကိုတော့ ရိုက်ထုတ်တော့မယ်ထင်တယ်။ ဘာတွေ့တွေ့ဝယ်ခိုင်းနေလို့:) )
Anonymous said... | Sunday, June 28, 2009 4:01:00 AM
လိုင်ရာလဲ ပြီးအောင် မ'က'နိုင်တော့ဘူး
မေ့ချင်တယ် ဆိုလို့တောင် မေ့မရ
နဲ့ချည်.. နဲ့ရဲ့နဲ့.. ငါတို့ဘဝတွေ...
သားကြီး said... | Sunday, June 28, 2009 4:37:00 AM
Sein Lyan said... | Sunday, June 28, 2009 5:08:00 AM
ဖုန်းမကြိုက်ပေမယ့် မကီ မှာပေးမယ့် အနမ်းဖုန်းကိုတော့
ဝက်ဝံလေး said... | Sunday, June 28, 2009 3:46:00 PM
ဖွားကိ များ ပထမ မရဘူး ဘိတ်ပဲ ရတယ် ဟွန်းးး ပြန်မယ် ပျံမယ် အထုပြန်မယ် ဒါပဲ ဟဟဟ
လင့်ခ် ယူသွားပါကြောင်း ဖွားကိရေ နော် တာ့ တာ ဘိုင်
သုဒြေ္န said... | Sunday, June 28, 2009 10:58:00 PM
ရှာရှာဖွေဖွေ...နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်...ပညာပေးတတ်တဲ့ ...ကိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်......ဖြစ်တတ်တဲ့ အဖြစ်ပျက်..လေးတွေပါ..သတိထားရမှာပေါ့ ....ကိုယ်လဲမတော်တဆ....ြ.ူဖစ်ခဲ့ ရင်....ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ..တော်တော်ပူမှာလို့ .......ခံစားရတယ်...ကာယကံရှင်က.တော်တော်ပူသွားပုံဘဲ.....မီးပူတိုက်တဲ့ ....အလေ့ ကျင့် .ရှိသူတွေကို....တဆင့် ပြန်ပြောလို့ ရတာပေါ့ နော်........ကျေးဇူးပါကိရေ.....ကိုတို့ တော့ ....မီးပူမတိုက်တတ်ဘူး.....ခင်တဲ့ ....သုဒြေ္န
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Monday, June 29, 2009 12:40:00 AM
ထပေါက်ကွဲမှာထင်ပြီးကြည့်နေတာ မီးပူနဲ့မှားကိုင်တာ မြင်မှ ရယ်လိုက်ရတာဗျာ...။
မကီ မီးပူတိုက်တဲ့အချိန်ပြောထားလေ ဖုန်းခေါ်မလို့
khin oo may said... | Monday, June 29, 2009 10:01:00 AM
ဟုတ်ပါရဲ့။ ရယ်လိုက်ရတာ. တော်ပါသေးရဲ့ခင်ဖုန်းကြည်တို့အဲသလောက်တော့မဆိုးမိဘူး။